Ilayisensi Yokusebenzisa Insangu e-Illinois | Konke Odinga Ukukwazi
Amalayisense Wokukhubazeka Wokukhishwa kweCannabis e-Illinois
Uyithola kanjani ilayisense lokungenisa insangu e-Illinois?
Umhlukumezi ilayisensi yisikhungo esifaka ngqo ukugxila kwe-cannabis kumkhiqizo ukwenza umkhiqizo ofakwe insangu. Lezi zikhungo zizonikezwa ilayisense nguMnyango Wezolimo futhi zizodinga ukufeza izidingo ezimbalwa ukuze zithole ilayisense yokusebenza.
Izicashazi ze-canannabis Ngezinye izikhathi Zingavimba Uju
Ngezansi sibheka ezinye zalezo zimfuneko. Sizophinda futhi sisebenzise imigomo ebekwe ngumthetho yalabo abafuna ukusetha amalayisense wokuhlukumeza izinhlangano ze-cannabis.
Ukukhishwa Kwezincwadi Zelayisense YaseCannabis
Ekuqaleni kukaJulayi 2020, i- umnyango wezolimo uzobe esekhiphe amalayisense enhlangano afinyelela kuma-40. Izicelo zala malayisense zizoqala kusuka ngoJanuwari 7, 2020, futhi iwindi lesicelo selayisense lokufaka i-infuser lizovalwa ngoMashi 15, 2020.
Ekupheleni konyaka ka-2021, uMnyango Wezolimo uzobe usukhiphe amalayisense enhlangano ephezulu yabasebenzi abangama-60. Ngaphambi kwalolu suku, umnyango ungamukela imithetho ezoshintsha le nombolo.
Izinyathelo ezithile umnyango ongazithatha ukukhulisa isibalo sabafakizicelo zokufaka amalayisense okufaka phakathi, "Ukuguqula noma ukukhuphula inani lamalayisense okususa kanye nokuguqula noma ukushintsha inqubo yokufaka amalayisense ukunciphisa noma ukuqeda izithiyo."
Izinto ezimbalwa uMnyango wezoLimo ozozibheka ngenkathi ukhula noma wehlise inani lamalayisense wokuhlukunyezwa ufaka:
Kukhona imikhiqizo enganele ye-cannabis noma ye-cannabis yokuhlangabezana nezidingo zeziguli ze-cannabis zezokwelapha.
Ukuhlinzekwa kwemikhiqizo esetshenzisiwe ye-cannabis akunakuhlangabezana nesidingo sabo bobabili abasebenzisi bezokwelapha nabokungcebeleka
Ingozi etholakele yokungeza izinhlangano eziningi zabakholwayo noma zokusungula lezi zinhlangano ezindaweni ezithile
Okuphathelene nezokuphepha okuqoshwe kuzo zonke izinhlangano ezingamameleli
Ushintsho emthethweni wenhlangano odinga ukungezelelwa noma ukuncishiswa kwezinhlangano zabaphule umthetho
Umnyango wezoLimo awunawo amandla okubhekana nezinhlangano zabahlukumezayo ezingeziwe.
Isicelo seLayisense ye-Infuser ye-Illinois Cannabis
Isicelo selayisense le-infuser sase-Illinois sizokwenziwa ngekhompyutha. Lapho ufaka isicelo, kudingeka okulandelayo:
Imali engabuyiselwa imali ye-Illinois yokufaka isicelo selayisense. Kuze kube nguJanuwari 2021, leli nani lizoba ngu- $ 5,000. Ngemuva kwalolu suku, umnyango wezolimo ungabeka enye imali ephakeme noma ephansi. Le mali izofakwa esikhwameni sokulawulwa kwensangu
Igama elisemthethweni le-infuser, ikheli lendawo elihlongozwayo, namagama nekheli lawo wonke amalungu ebhodi nezikhulu eziyinhloko
Umbiko ophelele, "imininingwane yanoma yikuphi ukuphatha okuphathelene necala noma ukwahlulela lapho noma yimuphi wezikhulu ezikhulu noma amalungu ebhodi omhlukumezi
(i) ababekwa benecala, batholwa benecala, bahlawuliswa, noma bebhalisiwe noma belayisensi imisiwe noma ichithwe, noma
(ii) ophethe noma osebenze ebhodini lebhizinisi noma lenhlangano engenzi nzuzo elinecala elinecala, wagwetshwa, wahlawuliswa, noma obhaliswe noma welayisensi limisiwe noma lahoxiswa ”
Imithetho yedolobha esebenza umhlukumezi izoyigcina ngokufaka uhlelo lokuqapha, uhlelo lokuphepha, kanye necebo lokusebenzela abasebenzi
Isipiliyoni embonini ye-cannabis, nencazelo echaza ukuthi abafaka izicelo bahlangabezana nokusebenza ekhishini lokuthengisa noma elabhorethri lapho kukhiqizwa khona imikhiqizo eyenziwe ukusetshenziswa kwabantu.
Uhlelo olunemininingwane yokuthi umhlukumezi uzophatha kanjani izidingo zakhe zamandla, izidingo zamanzi, kanye nokuphathwa kwemfucuza
Umnyango wezoLimo ungahluleka ukwenza isicelo sokwenza inhlangano engenzi amalungelo ngalezi zizathu ezilandelayo:
Umenzi wesicelo akazange ahlinzeke yonke imininingwane edingekayo. Kwesinye isikhathi, “Uma uMnyango wezoLimo uthola isicelo esinemininingwane elahlekile, uMnyango wezoLimo unganikeza lowo ofaka isicelo isaziso sokushoda kwakhe. Umfakisicelo uzoba nezinsuku eziyi-10 zekhalenda kusukela ngosuku lokukhishwa kwesaziso sokuthumela imininingwane engaphelele. "
Uma umenzi wesicelo ehluleka ukuletha imininingwane ephelele ngisho nangemva kwalesi saziso, isicelo sizokwenelwa.
Izokhishwa Kanjani Ilayisensi Yokusebenzisa Insangu e-Illinois
UMnyango wezoLimo kuzodingeka ukuthi uqhamuke nohlelo lokuthi izikolo zifaka izicelo ngabenzi bezicelo zenhlangano engenelela ngenhloso yokufaka isicelo. Labo abathola amaphuzu aphezulu kakhulu bazonikezwa kuqala amalayisense enhlangano yabaqambi. Ukuthola amaphuzu kuzosuselwa kulwazi olunikezwa ngumfakisicelo wenhlangano, ukusethwa kwenhlangano okuphelele, kanye nokucaca kwefomu lesicelo.
Ezinye izinto okufanele zibhekwe zifaka:
Ngabe ilungele kangakanani indawo ehlongozwayo
Ukugcina amarekhodi kanye nohlelo lokuphepha
Isimo sokulingana kwezenhlalo
Izinhlangano ezinenkohliso ezihlose ukuhlanganyela nomphakathi zizonikezwa amanye amaphuzu. Inhlangano yabahlukumeza ingakhombisa isifiso sabo sokubandakanya umphakathi ngokuthi, “babambe iqhaza entweni eyodwa noma ngaphezulu, kepha kungagcini lapho, ezenzweni ezilandelayo:
(i) ukusungulwa kohlelo lokufaka incubator olwenzelwe ukukhulisa ukubamba iqhaza embonini ye-cannabis ngabantu abazokufanelekela ukuba Izicelo Zokulingana Komphakathi;
(ii) ukuhlinzeka ngosizo lwezezimali ezikhungweni zokwelapha ukusetshenziswa kwezidakamizwa;
(iii) ukufundisa izingane nentsha mayelana nokulimala okungase kube khona ekusebenziseni insangu. noma
(iv) ezinye izindlela ezibonisa ukuzibophezela emphakathini womfakisicelo ”.
Ngabe ilayisensi inganqatshelwa?
Yebo, umnyango wezolimo uzoba nelungelo lokwenqaba isicelo uma benomuzwa wokuthi ofake isicelo akazange azilandele izinqubo ezibekiwe kanye nezidingo. Isicelo selayisense singanqatshelwa uma kuvela enye yalezi zimo ezilandelayo:
Zonke izinto ezidingekayo azithunyelwa
Uma umenzi wesicelo engahambisani nemithetho yendawo yokusiza yendawo
Uma kukhona amanye amalungu ebhodi kanye nezikhulu ezinkulu zingaphansi kweminyaka engama-21 ubudala
Ukuvunywa Kwangaphambilini Kwezidingo Zelayisense Yesikhungo Sabantu Abadala
Izidingo zesicelo seCannabis infuser Organisation
Ezinye izinto izinhlangano ezingamgqugquzeli kuzodingeka ukuthi zifake:
Idokhumenti yokusebenza ebanzi enemininingwane yezinqubo zokusungula, izinqubo zokuqapha, ukugcinwa kwamarekhodi kanye nohlelo lokuqasha
Uhlelo lokuphepha olusetshenziswa yinhlangano yabaphazamisi kumele lubhekisiswe ngamaphoyisa
Ukucutshungulwa kwemikhiqizo esetshenzisiwe ye-cannabis kuzokwenziwa endaweni ebiyelwe. Ukufinyelela kule ndawo kuzokhawulelwa njengoba kuchaziwe emthethweni.
Imikhiqizo esetshenzisiwe ye-canabis izothunyelwa kuphela enhlanganweni eyabelayo
Inhlangano yabahlukumezi ayivunyelwe ekubandlululeni ngokuthe ngqo noma ngokungaqondile izintengo lapho ithengisela ezinhlanganweni ezahlukahlukene ezisabalalisa. Yonke imikhiqizo eyenziwe yizinhlangano zabaphathela umthetho iyadingeka ukuthi ibe sezingeni eliphakeme futhi inentengo efanayo kubo bonke abathengi.
Imicabango yokuGcina kwilayisense ye-cannabis infuser
Lokhu okungenhla kungenye nje yezidingo ezibekwe ngumthetho walabo abafuna ukusungula izinhlangano zabashokobezi. Kuzoba nezidingo eziningi njengoba izinto kulindeleke ukuthi ziqhubeke zishintsha. Labo abanesifiso sokujoyina lo mkhakha kuzodingeka baqhubeke nokuziqonda ngokwenzekayo.
Ukuze uphumelele, kufanele uthintane ne ummeli we-cannabis ongakusiza uqonde zonke izidingo ezidingekayo ukufaka isicelo selayisense. Bazoqinisekisa ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza luhamba okokuqala. Ngommeli, kuzoba lula futhi ukuqhubeka nokusebenza ngokulandela umthetho.
Amalayisense we-infuser - lowo owutholayo uma ufuna ukwenza ama-brownies ngenzuzo e-Illinois.
Sawubona, ngingu-Tom - ngithole ngokuhamba ngommeli we-cannabis bese ngiya kummeli wami wemboni ye-cannabis ukuze ngibuze noma yimuphi umbuzo iqembu lakho elinalo. Ngelayisense le-infuser - isihloko namuhla - i-Illinois yenze okuthile okuhlukile kunamalayisense weprosesa asentshonalanga - sizongena ngokujulile kulokhu- ngakho-ke hlala uzungeze futhi ngizokutshela ukuthi ungazithola kanjani izinsizakalo zokukhipha ongaxakeka ukuthi nini kuziwa ilayisense infuser.
Ngakho-ke bhalisa, buza umbuzo kumazwana, bese usinika izithupha futhi ngithemba ukukubona ngoLwesithathu ezindabeni ze-Legalization - manje, ake singene kwilayisense le-Infuser.
Umnyango we-ag we-Illinois uzokhipha amalayisense angama-40 okufaka ngoJulayi ka-2020, namanye angama-60 ngoDisemba 2021. Asazi ukuthi mangaki amalayisense azofika ngemuva kuka-2022 - kepha kubonakala sengathi awunamkhawulo ngemithetho eguqulwe ngumnyango we-ag ngemuva ukuthi. Kuzoxhomeka ekutholakaleni kwale mikhiqizo efakiwe ukuba yanele - engicabanga ukuthi kuzodingeka silinde ukubona ukuthi abathengi bakho bakusetha kanjani lokho. Ingabe uzothenga.
Amaqebelengwane Esikhala? Ama-brownies ebhodwe? Kufakwe ama-gummies, amaswidi aqinile - noma indinganiso yegolide kimi… I-Lagunitas new THC-brau. Amahops weHiFi - manje aseCalifornia, eColorado - futhi mhlawumbe ngo-2021 - Illinois njengoba uyazi iLagunitas ine-taproom endaweni yaseChicagoland.
Okuqaphelekayo - ilayisense lokungenelela yilo elishibhile uma kuziwa emalini yelayisense ekhokhiswa nguhulumeni. Kukukhulu oku-5 ukufaka isicelo, bese kuba ngu-5 ukunqoba - bese kuba yimali engu- $ 20,000 ngonyaka ngemuva kwalokho.
Izicelo zizophuma ngoJanuwari ka-2020, ngethemba lokuthi sizothola imithetho ethe xaxa - kepha izinto eziphambili sizibona esicelweni somthetho uqobo.
Akuhlukile kwezinye amalayisense e-cannabis. Udinga ukwenza ukudalulwa okuningi nezinhlelo mayelana nokuthi inkampani izosebenza kanjani, igcine amarekhodi, uhlelo lwabasebenzi, izinhlelo zokuphepha nokuqapha. Kufanele udalule noma yiziphi izinqubo zokuphatha noma zokwahlulela, ube okhokhiswa intela yakho kanye nokwesekwa kwengane, uhlolwe ngemuva. Ubunikazi banoma ngubani ophethe okungaphezu kuka-5% welayisense. Chaza nomsebenzi wakho ohlongozwayo wokuqashwa -
Nakhu Umkhiqizo wase-Illinois wokulingana kwezenhlalo embonini ye-cannabis ekhombisa inani lombuso - leyo mikhuba yokuqashwa bekufanele ikhombise ukuthi inkampani yakho izokwazisa kanjani, iqashe, ifundise - abambalwa, abesifazane, omakadebona, abantu abakhubazekile futhi banemikhuba efanelekile yezabasebenzi nokuvikelwa kwabasebenzi.
Ngaphezu kwalokho - kufanele ukhombise ulwazi lwakho noma ukwenza kwezebhizinisi okukhuthaza ukunikezwa amandla kwezomnotho endaweni ethinteke ngokungalingani. Lawa mabalazwe ngokuyisisekelo ahambisana nobuphofu basemadolobheni kuhulumeni - abeka izwe futhi imephu esemthethweni iku-inthanethi kuwebhusayithi yeDCEO. Umfakisicelo futhi unama-20% wamaphoyinti abo ngokususelwa kubo njengomfakisicelo wezimali zenhlalo.
Lapho-ke isicelo sibuyela esimeni esihle se-infuser - badinga ukudalula imininingwane mayelana nendawo evaliwe lapho kuzobekwa khona insangu. Kufanele uchaze isipiliyoni sakho esisebenza ekhishini lokuhweba noma elebhu elenza imikhiqizo yokusetshenziswa ngabantu. Bese ubhala noma yimaphi ama-degree noma izitifiketi kanye nesipiliyoni esifanele wena nethimba lakho eninalo kula mabhizinisi ahlobene nokudla.
Ngemuva kwalokho wena, njengabatshali bezandla kufanele uchaze izindlela ezithile zemvelo nokuluhlaza ukuze usize ukonga amandla enkampanini yakho.
Ukushaywa kwemali kuyaqhubeka njengokukhula kukhula kanye namaphuzu akhishwa ngawo:
Ukufaneleka kwesikhungo - ngakho-ke uma ucabanga ukuthi ushibhile esikhungweni sakho - vele uyeke ukuzama. Qiniseka ukuthi ufuna ukwenzani - isakhiwo sihle, sivikelekile, songa ugesi njengoba sinjalo.
Ukufaneleka kohlelo lokuqeqeshwa kwabasebenzi - thola ulwazi
Inqubomgomo yokuphepha nokugcinwa kwamarekhodi - umgogodla wemboni- ibuye ifake ukubhekwa kwe-AV kwamahora angama-24.
Ukuphepha komkhiqizo nohlelo lokulebula - aka qiniseka ukuthi ungafaneleka ukuthola imithamo kalula futhi ulahle izexwayiso ze-THC neziqukathi ezifakazela izingane.
Amaphoyinti okulingana kwezenhlalo
(amaphuzu amancane -2% of so) Amaphuzu ezemvelo, uhlelo lokwehlukahlukana, e-Illinois nabanikazi bomakadebona & ibhonasi yomphakathi ukufinyelela othayi.
Abahlukumezi bangaba "nezinto zokusetshenziswa" kuphela uma kukhulunywa nge-cannabis - umthetho oyichaza njengesiqephu abafisa ukusifaka emikhiqizweni yabo.
Eqinisweni umthetho uyenqabela abasebenza ngokungemthetho ukwenza okukhishwa kugxili lwe-cannabis kusuka ezimbali ze-cannabis ezichaza ngokujwayelekile iprosesa embonini. (410 I-ILCS 705 / 35-25 (n)) -
Kodwa-ke, umnyango we-Ag ngelinye ilanga ungavula ilayisense yokucubungula ukwenza lokho kukhishwa - njengoba umthetho we-infuser ukuvumela lokho, kepha ngaphandle kwesango - ilayisensi ejwayelekile ye-Infuser ayinayo ingxenye yokukhipha - kulokho udinga ilayisense lokukhulisa ubuciko - ngakho-ke google lokho.
Kepha uma ufuna ukwenza izinto ezinhle nge-THC ezifakiwe kuyo - zizwe ukhululekile ukuthanda futhi ubhalise noma ungivakashele kummeli wemboni yensangu ngokugogoda ummeli we-cannabis noma "ilayisense lokuphamba" futhi ngithemba ukuthi mina nawe sijabulela ukwenziwa kwe-cannabis yaseLagunitas ngonyaka ka 2022.